Ugboro abuo weputara faucet kichin na Chrome na ojii - Viga Faucet emeputa
Home K ere Kachasị Akpụkpọ Ahịa Kachasị mma Ugboro abuo weputara faucet kichin na Chrome na ojii
Ihe: brass + silicon hose
Ọkachamara nwere ike isi ike ịnweta mmiri esi nri na-ejikọ ọsụsọ na profaịlụ sọọsọ, mana ọ gaghị adị. Ka anyị were foset a na kichin, dịka ọmụmaatụ. Ọ na-ejide ọmarịcha regal mgbe ị na-ejikọ ọkpọ ojii na mmiri chụsịsị chrome, ma, ọ nwere nkwanye mmiri ọdịnala na mgbanye angled ka imewe kichin wee nwee ụwa kachasị mma.
Na otu lever iji chịkwaa okpomoku na ntoputa, ihe eji eme ihe n’oge a na-arụ ọrụ nke ọma ọbụlagodi n’ụdị ndị ahụ s na-achọkarị ụzọ dị ntakịrị. Monochromatic, ụlọ ọrụ nri esi nri a ga-eweta nkasi obi ọhụụ na ụdị njedebe dị elu ma gwụsịa site na iji obere mmetụ nke mmezi ọzọ.
Ndị na-emepụta kichin mmiri na kichin nwere ike ịbịaru ụzọ dị iche iche maka oku a na-eme maka kichin oge a, nke a na-enweta ya n'ụzọ ziri ezi site na imewe nke na-enye ihe niile - ma emesịa ụfọdụ - nke onye ahịa ga-achọ. Ọ nwere ike bụrụ naanị akụkụ dị mkpa nke ime ụlọ kichin ọhụrụ ha!
• uclọ mmiri kichin ọgbara ọhụrụ nwere ọtụtụ ọrụ
• Ndị nrụpụta ọkpọ mmiri kichin n'oge a haziri iji rụọ ọrụ kachasị n'enweghị nsogbu
• Ngwakọta mara mma nke chrome na oji maka ezigbo vibe
Next: Zoro Ezo Zoro Ezo Mara Mma Fulo